Maitiro ako epfungwa-muviri kubatana kunokanganisa hutano hwako - Wellness | Chikunguru 2021
Dhinda Nhau, Wellness Nharaunda Kambani, Info Info Kambani, Nhau Hutano Dzidzo, Nhau Checkout Nharaunda, Kambani Wellness Kambani, Hutano Dzidzo Kambani Dzidzo Yehutano Nhau Kambani, Iyo Checkout Zvinodhaka Info
Kuru >> Wellness >> Maitiro ako epfungwa anogona kukanganisa hutano hwako
Maitiro ako epfungwa anogona kukanganisa hutano hwako
Paunounza pfungwa-yemuviri kubatana maererano nehutano, vanhu vanowanzo funga nezve yakazara maitiro. Kazhinji inoratidzirwa semushonga unowirirana kana unotsiva, zviitiko zvakaita seyoga kana kufungisisa ndedzimwe dzenzira dzinozivikanwa dzekupinza muchinhu ichi.
Nepo mhando zhinji dzemaitiro dzichigona kutibatsira kuti tigadzirise hutano hwedu, masayendisiti akaona kuti pfungwa dzedu dzinogona kukanganisa hutano hwedu kubva pane zvakatarisana. Haingori chete hutano hwepfungwa hwedu hunotora chinhanho mune yedu yakazara chikamu chehutano, asi iyo nzira yatinofunga nezve yedu panyama chiitiko inogona kuumba zviwanikwa zvedu.
mhedzisiro ye xanax inogara kwenguva yakareba sei
Chii chinonzi kubatana kwepfungwa?
Zviitiko zvekuongororwa chirwere chepfungwa zviri kuramba zvichiwanda. Vanopfuura mamirioni makumi mana nemanomwe vanhu muUnited States vanobatwa nechirwere chepfungwa mune chero gore rakapihwa. Izvi kuongororwa kunogona kusanganisira kushushikana kuderera, kushushikana kwakazara, kana schizophrenia, uye nzira idzo zviratidzo dzinozviratidza pachavo dzinogona kusiyana zvakanyanya. Tambo yakajairika, zvisinei, ndeyekuti chero chinokanganisa munhu mupfungwa chinogona kukanganisa hutano hwepanyama.
Tora kuora mwoyo, somuenzaniso . Zvimwe zvezviratidzo zvakajairika zveMajor Depression Disorder ndezvepfungwa: kusuruvara kusuruvara kana kudzokorora pfungwa dzekuzviuraya. Asi, iyo zviratidzo zvepanyama zveichi chiitiko Inogona kusanganisira kushaya hope, kuneta kusingaperi, uye kunyangwe marwadzo nemarwadzo mumuviri wako wese. Pamwero wakakura, avo vane hutano hwepfungwa vanoongorora kazhinji vanowana comorbidities zvekurapa senge kufutisa, asima, chirwere chemwoyo, uye kuwedzerwa kweropa kupfuura vamwe vanhu vese.
Izvo zvakakoshawo kuti uzive kuti vanhu vane chirwere chepfungwa vanopihwa mishonga inogona kuve nemhedzisiro inokanganisa muviri, senge kuwedzera uremu uye kuoma muromo.
RELATED: Kushungurudzika kunokonzerwa nechirwere chemuviri?
Kunze kwehutano hwepfungwa chete: kurwadziwa kwepfungwa
Iko kubatana pakati pemafungiro uye manzwiro atinoita kunotonyanya kuratidzwa pamwe nekudzidza kwepfungwa, kana psychosomatic, kurwadziwa , mamiriro apo muviri nepfungwa zvakabatana zvakanyanya kune imwe seti yemanzwiro uye zviratidzo. Vakawanda vanotambura nechirwere ichi dzinowanzoendeswa kubva kuna chiremba kuenda kuna chiremba, sezvo dzimwe nguva kwakaomera varapi kuti vaongorore nekurapa.
Kurwadziwa kusingaperi kwakabatanidzwa nezvikonzero zvepfungwa, sezvo pfungwa dzichigona kuburitsa kana kuwedzera zviratidzo zvemuviri. John Sarno, nyanzvi inotungamira mukurapa kwepfungwa, akagadzira dzidziso yekuti zviratidzo zvakawanda zvinokanganisa kusaziva kuti ubatsire mukudzvinyirira kwakadzama kwemanzwiro. Chaizvoizvo, vanhu vanotanga kunzwa kurwadziwa mumuviri pane kunzwa kurwadziwa pamoyo. Pave paine mazana ezviitiko zvehutano hwakasiyana , kubva pahupofu hwechinguva, kurwadziwa kwemhasuru, kutadza kufamba, nezvimwe, izvo zvakasungirirwa kumashure kuzvikonzero zvepfungwa.
Nyaya yekudzidzira mukurovedza muviri
Kubatana pakati pepfungwa nemuviri kunopfuura kune avo vane chirwere chepfungwa kana kurwadziwa kwepfungwa. Masayendisiti paStanford University akatanga 21-gore chirongwa , iyo yakaongorora vanhu vakuru makumi matanhatu nematanhatu uye maitiro avo ekufunga pamusoro pekurovedza muviri. Iyo data yakaunganidzwa yaisanganisira kangani ivo vatori vechikamu vachiita zvekuita zvemuviri pamwe nemanzwiro avakaita nezve kwavo kuita kwavo vachienzaniswa nevezera ravo.
Nekuda kwehurefu hwekudzidza, vamwe vevanhu vakafa panguva yechidzidzo kubva kune dzakasiyana siyana dzehutano. Nekudaro, avo vaifunga kuti havasi kuita chiitiko chakawandisa sevezera ravo vakafa chaizvo vadiki pane vamwe, kunyangwe vachiita zviyero zvakafanana zvekurovedza muviri.
Chii chakakonzera iyi pateni kubuda? Vatsvakurudzi vanozviti kune zvimwe zvingangodaro zvikonzero , zvese izvi zvinoramba zvichitsigira pfungwa yakasimba yekubatana kwepfungwa nemuviri:
Kuzvienzanisa nevamwe inogona kukurudzira kudzikisira, uko kana isu tichitenda kuti hatikwanisi kupfuura shamwari nemhuri, tinogona kusatombozvinetsa nekuedza kurovedza muviri pakutanga.
Kuisa zvinotarisirwa patiri inogona kukonzera kushushikana zvisina kukodzera uye inogona kutungamira kune yakashata mamiriro ehutano. Mhedzisiro iyi inotsigirwa ne data rinoongorora kuti hutano hwepfungwa nemanzwiro zvinogona sei kuraira hutano hwedu.
Iyo nocebo mhedzisiro ndicho chikonzero chekupedzisira chekufa kwekutanga kune avo vaifunga kuti vaive vasina basa. Chiito chakareruka chekufunga kwakaipa chinogona kukwana kudzikisira huwandu hwebhenefiti, saka kana iwe uchitenda kuti hausi kurovedza zvakakwana, saka muviri wako hauzokohwa huwandu hwakaenzana hwebatsiro uchienzaniswa neavo vane maonero akanaka.
RELATED: Chii chinonzi nocebo mhedzisiro uye kuti ingakanganisa sei mishonga yako
Mashandisiro ekushandisa pfungwa-yemuviri kubatana kune yako mukana
Kana zvasvika pane wako wepfungwa wakakomberedza chiitiko chemuviri uye hutano hwako hwese, zvakakosha kuti urangarire kuti iwe unosvika pakuona kuti ndezvipi zvinhu zvinobatanidza anoshingaira mararamiro . Kushanda nachiremba wako wekutanga wekuvandudza chirongwa chekudya uye kurovedza muviri chinosangana nezvido zvako ndiko kubheja kwako kwakanyanya kuona mhedzisiro, chero bedzi iwe uchichengeta yako yekufunga maitiro akanaka!
Iyo inonyanya kufarirwa mushonga munaKurume: Vitamin D
Breo vs. Advair: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
maitiro ekurapa hangover mangwanani
allergies meds embwa pamusoro pekaunda
chii chandingatora pakurasa
ndeupi musiyano uripo pakati pebuprofen uye tylenol
yakawanda zvakadii furu inopfura kuma cvs
chii chinonzi glipizide yemishonga inoshandiswa